Expressing Myself: पल्पसा बाँचेको युग
हिजोआजका मेरा धेरैजसो समयहरू दृश्यको आर्ट ग्यालरीमै बसी बित्‍ने गरेका छन्। त्यो दिन पनि म त्यहीँ थिएँ। दृश्य उसको नयाँ शिर्षक “रि इन्कार्नेशन”मा काम गर्दै थियो। विगत एक हप्तादेखि ऊ सन्तुष्ट भइरहेको थिएन, आफ्नो आर्टलाई पूर्ण रूप दिन। यस क्रममा उसले धेरै क्यानभासहरू च्यातिसकेको थियो। त्यस दिन ऊ त्यो शिर्षक पूरा गरेरै छाड्ने धुनमा थियो।
दृश्यलाई भित्र छोडेर म बाहिर टेबलमा बसिरहँदा केही पर एउटी केटी देखें। सुरुमा उसलाई ठम्याउनै सकिनँ। कतै देखेजस्तो, चिनेजस्तो लाग्यो। उसले रुकस्याक भिरेकी थिई, घाँटीमा क्यामेरा थियो। ऊ अझ नजिक आउँदै थिई। सूर्य डुब्दै गरेको चित्र भएको टि–सर्ट र जिन्स लगाएकी। म झस्किएँ। ऊ पल्पसा थिई!!!
म बाहिरैबाट चिच्याएँ “दृश्य! पल्पसा आउँदैछ !!!!”
दृश्य झर्किनु र झस्किनु स्वाभाविक थियो। ऊ आर्ट ग्यालरी नजिक आइसकेकी थिई। बाहिर एकछिन मैले उसलाई हेरिरहेँ, एउटा आश्चर्य मिश्रित हेराइले। मलाई संसारमै सबैभन्दा आश्चर्यचकित लाग्ने घटना मेरै आँखा अगाडि विस्फोट हुँदैछ जस्तो लाग्दै थियो। दृश्य ढोकाबाट बाहिर निस्कन मात्र खोजेको थियो, ऊ मसँग झर्कियो।
“खोई पल्पसा? नचाहिँदो कु.......रा” दृश्य बोल्दाबोल्दै पल्पसा उसकै अगाडि आई। उनीहरू झन्डै ठोक्किएका।
त्यसपछि समयले आफ्नो अस्तित्व बिर्सिए जस्तो भान भयो। सुनसान। दृश्य पल्पसालाई हेर्दै थियो, आँखा झिमिक्क पनि पारेको थिएन। पल्पसा पनि त्यसै गर्दै थिई। उसले पल्पसालाई अँगालो हाल्छ। निधारमा म्वाइ खान्छ। हामी सबैका आँखाहरूमा हजारौं प्रश्नहरू जन्मिँदै थिए। दृश्यको यस्तो स्वरूप मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ। त्यसपछि उसले पल्पसालाई समाएर भित्र लैजान्छ। दुवैजना सोफामा बस्छन्। म पनि पछिपछि गएर छेउको कुर्सीमा बस्छु। पल्पसाले अब खेप्नुपर्ने प्रश्नहरूको ओइरो बारे म कल्पना गर्दै थिएँ।
“पल्पसा, तिमी कसरी....?” दृश्यले लरबराउँदै सोध्छ।
ऊ मुसुक्क हाँस्दै भन्छे “म सबैथोक भन्छु तिमीलाई।”
अनि मतिर फर्कन्छे।
दृश्य भन्छ “पल्पसा, ऊ मेरो नजिकको साथी, उज्ज्वल। ऊ लेखक हो। हिजो आजको युवा पुस्ताको सशक्त लेखक। तिमी हराएको केही दिनपछि चिनजान भयो ऊसँग।”
ऊ पल्पसालाई हेरिरहन्छ।
पल्पसाले मलाई अभिवादन गर्छे।
म अभिवादन फर्काउँदै भन्छु “पल्पसाजि साँच्चै म चकित छु आज। तपाईँ दुर्घटनामा परेको केही दिनपछि दृश्यसँग भेट भयो। ऊ त्यो बेला 'पिकासो ग्यालरी' मा एकल चित्रकला प्रदर्शनी गर्दै थियो। त्यो बेला दृश्यले तपाईँबारे सैबथोक भन्यो। तपाईँको बारेमा थाहा पाउँदा म पनि विक्षिप्त भएको थिएँ। तर आज अनौठो गरी स्वयं तपार्इँलाई भेट्दै छु। मलाई विश्वासै भएको छैन। जे होस् दृश्यको अनुहार हेरेर यी घटनाहरूमा विश्वस्त हुँदैछु। नयाँ जीवन पाउनु भएको रहेछ, 'अ रिन्कारनेसन', कंग्राचुलेसन्स!”
मैले यसो भनी सिध्याउँदा दृश्यले मलाई हेर्छ। अनौठो गरी।
“जे पायो त्यहि!” पल्पसा टाउकोलाई दृश्यतर्फ ढल्काउँछे।
दृश्य र पल्पसा मुखामुख गरी हाँस्छन्।
ऊ फेरि थप्छे “उज्ज्वलजी म रि इन्कार्नेटेड भएको चार वर्ष पुग्न आँट्यो बल्ल बधाई पाँउदै छु। एनी वे थ्याङ्क यू!”
“दृश्य, बरु कफि अर्डर गर न। पट नै भन। अनि गफ गरौंला। ए... नारन दाइलाई पनि बोलाऊ बरु”
(पल्पसा लेखक नारायण वाग्लेको कुरा गर्दै थिई।)
दृश्य भन्छ “म आँफै बनाउँछु कफी। अनि नारन दाईलाई पनि बोलाउँला।”
दृश्य नारन दाईलाई फोन डायल गर्दै किचनतिर पस्छ। पल्पसा उठेर दृश्यको नयाँ आर्ट श्रृखंलाहरू हेर्न थाल्छे।
त्यसक्रममा धेरैबेरसम्म त्यही आफूलाई मन परेको चित्र हेरिराखी। त्यो चित्रमा पात खस्दै गरेको थियो। त्यसपछि ऊ 'रि इन्कार्नेसन' शिर्षकमा भुलिराखी। दृश्यले चित्रलाई अन्तिम रुप दिइसकेको रहेछ। पल्पसा उक्त चित्रको शिर्षक अनि कुनामा लेखिएको मिति देखेर छक्क पर्छे। त्यसैले होला उसले घरी किचनतिर घरी मतिर हेर्दै थिई। अनौठो लागेर होला।
पल्पसा चन्चल हुँदै सोध्छे “दृश्य, फूलन खोइं? उसलाई पनि बोलाऊ न। मलाई देखेर अचम्म पर्ली। मलाई देखेर भू...त भनेर चिच्याउली!!”
किचनबाटै दृश्यले अलिक ठूलो स्वरमा भन्छ “ए फूलन? ऊ त अमेरिका गइसकी। बिहे गरेर। त्यही गायक भाईसँग। दुबैको सहमतिमा बिहे गराइदिएँ।”
“ए! राम्रो भयो” ऊ भन्छे।
दृश्य कफीसहित फर्कन्छ। कफी खन्याउँदै गर्दा ढोकामा नारनदाई झुल्किन्छन्। पल्पसाले अभिवादन गर्छे। नारनदाईले केही मिनेटसम्म पल्पसालाई हेरिरहन्छन्।
“तपाईँहरू सबैलाई म कसरी बाँचे, कहाँ हराएँ भन्ने कुरामा एकदमै खुल्दुलि होला हगि? अब म सबै भन्छु।” पल्पसाले कथाको पोको फुकाउन थाल्छे ।
(पाठकहरू ! त्यसपछि म, दृश्य अनि नारनदाई सबैको अनुहारमा एउटा विचित्रको जिज्ञासा झुल्किन्छ। मेरो मुटुको धड्कन म आफैंले स्पष्ट सुन्दै थिएँ।)
“त्यो एउटा डरलाग्दो दुर्घटना थियो। मुटु नै छिया–छिया पार्ने खालको। बसका यात्रुहरू पिसाब फेर्न निस्कँदा दृश्य पनि झरेको थियो। म बसभित्रै थिएँ। सोचेँ, बाहिर निस्केर फ्रेस हुनुपर्‍यो। बसबाट झरेँ। केही छिनमै बसले हर्न बजायो। यात्रुहरू क्रमशः चढ्दै गर्दा बस एक्कासी विस्फोट भयो। दृश्य पनि चढ्यो होला भन्ने अनुमान गरेँ। त्यसैले मेरो मन क्षत्‌विक्षत्‌ बसभन्दा लाखौं गुणा बढी ध्वस्त भयो। अचानक चार, पाँच जना मानिसले मलाई घेरे। उनीहरूले टाउकामा रातो रुमाल बेरेका थिए। उनीहरुको रुमालको बीच भागमा तारा अंकित चित्र थियो। अनि मेरो घाँटीमा क्यामेरा झुन्डिएको। उनीहरूले मलाई पत्रकार ठानेर लछार–पछार पारे। बोल्ने मौकै दिएनन्। म अपहरणमा परेँ। पाँच दिन पाँच रात हिँडाएर एउटा दुर्गम गाउँमा लगे। केही महिनासम्म बाहिर निस्कनै पाइनँ। एउटी छापामार केटीलाई बिन्ती गरें। म 'डकुमेन्ट्री फिल्म मेकर' भएको बताएँ। लामो अनुरोधपछि उसले मलाई बुझी। र उसैको अनुरोधमा मलाई बाहिर निस्कन दिइयो। तर उनीहरूसँग शंकालु आँखा बाँकी नै थियो। मलाई क्यामेरा भने दिइएन। म पहिलो दिन घुम्दै गर्दा थाहा पाएँ, त्यो ठाउँ कर्णालीको एउटा विकट गाउँ रहेछ। तपाईँहरू अचम्म मान्नुहोला, पहिलो दिनमै नेपालका प्रख्यात मानवशास्त्रि डोर बहादुर विष्टसँग मेरो भेट भयो।”
यो सुनेर मेरो आश्चर्यको सीमा अझ भत्कँदै थियो। नारनदाईले आँखाको आकार बढाउँदै मतिर हेर्छन्।
“उहाँ बेला–बेला अनुसन्धानको क्रममा हराउनुहुन्छ भन्ने पढेकी थिएँ। त्यो भेटमा उहाँ आफैँ खुल्नुभयो, 'पल्पसा, अहिले म यहाँ भएको कुरा धेरैलाई थाहा नहोला। लगभग दशक यता म यहीँ बसेर अनुसन्धान गर्दैछु।' मैले थाहा पाएँ, सरलाई विशेष सम्मान गर्दा रहेछन् छापामारहरूले। त्यसपछि डोरबहादुर सरको अनुरोधमा म अपहरणमुक्त भएँ। उहाँले मेरो क्यामेरा पनि मागिदिनु भयो। अनि म पनि सर बसेकै एउटा घरमा बस्न थालेँ जहाँ घरबेटीका पाँचजना र हामी दुई गरी सातजना भयौं। मैले डकुमेन्ट्री फिल्म बनाउने राम्रो स्रोत भेटेकी थिएँ। सरले पनि निकै मद्दत गर्नुभयो। आफू सन्तुष्ट हुँदासम्म डकुमेन्ट्री बनाउन भनी अनुसन्धान गरिरहेँ।”
यसैबीच ऊ दृश्यलाई हेर्छे, “तिम्रा बारेमा पत्रिका पढेर थाहा पाएँ। धेरै खुसी भएँ। तिम्रा चित्रहरूले यहाँ काठमाण्डौ लगायत विदेशमा ख्याति कमाएको पनि थाहा पाएँ। त्यहाँ लगभग चार वर्ष बसेपछि सरले मलाई फर्कन सल्लाह दिनुभयो। मलाई उचित लाग्यो। म त्यहाँ बस्न थालेको केही समयपछि यता देशले कोल्टे फेरिसकेको थियो। मसँग पनि धेरै स्रोत जम्मा भैसकेका थिए। अन्ततः फर्कने सोच गरेँ र आज म तपाईँहरू सामु छु।”
पल्पसा लामो सास फेर्दै भन्छे। ऊ नारन दाईतर्फ फर्कन्छे। म हाँस्दै भन्छु, “दाई तपाईँले उसलाई मारे पनि ऊ बाँची। आजको युगमा अब लेखक आफ्ना पात्रहरूलाई आफ्नै इच्छामा बाँध्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भयो नि हगि?”
नारनदाई चुरोट सल्काउँछन्। धुवाँभित्र आफै पुरिएर भित्र कतैबाट गहिरो ध्वनि निकाल्छन् “हो अब बेग्लै युगको थालनी भएको छ। यो घटनाले अब लेखकले चाहेको बेला पात्रले मृत्यु मर्नु पर्ने छैन भन्ने पुष्टि भयो। मैले धेरै पाठकको खप्कि खानुपर्‍यो 'विनासित्ती पल्पसालाई मार्‍यो' भनेर।”
मलाई अनौठो लाग्दै थियो साक्षात् लेखक अनि उसको पात्रको संवाद सुनेर। दाई मतिर फर्किएर भन्छन्, “उज्ज्वल, डोरबहादुर सर पनि भेट्टिनुभयो। अब उहाँले गरेका अनुसन्धानहरू बाहिर आउनु पर्छ।”
बीचैमा पल्पसा भन्छे “तर दाई, सरले मलाई यता पठाउँदा आफू त्यहाँ भएको कुरा नखोल्नू भन्नुभएको थियो।”
म भन्छु “जे होस् अब हामी फेरि सरलाई गुमाउन चाहँदैनौं।”
पल्पसा केही बोलिन।
नारन दाई भन्छन् “पल्पसा तिम्रो हजुरआमा त एक्सपाएर भइसक्नुभयो नि।”
“अँ थाहा पाएँ, धेरै दुःख लाग्यो।”
“अनि बाबा ममीलाई फोन गरी भन्यौ त आफ्नोबारे?”
“अँ भनेँ। एकदमै डराउनुभयो अनि आत्तिनुभयो। खुब गाली गर्नुभयो। मम्मी धेरै रुनुभयो, फोनमै। मलाई चाहिँ एकदम हाँसो उठ्यो। जे पायो त्यहि, है दृश्य? कस्तो रोएर टेन्सन मात्र। मेरो बिहे गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो।”
“अनि के जवाफ दियौ त?” हतारिदै दृश्यले भन्छ।
ऊ हाँस्छे, “डन्ट वरि माइ डियर, वहाँहरूलाई तिम्रो बारेमा खुलस्त भनिदिएँ। दे आर पोजेटीभ टुवार्डस यू! दशैंमा आउने रे!”
हामी सबैजना हाँस्छौं। पल्पसा कपमा कफि खन्याउँदै नारन दाईलाई सोध्छे , “दाई, तपाईँको के हुँदै छ नि? 'त्यहाँ' छोड्नुभयो रे। अनि अब के गर्ने सोंचमा हुनुहुन्छ त?”
“अँ 'त्यहाँ' छोडें। साथीहरूसँग सल्लाह गर्दैछु, अबका दिनहरूमा के गर्ने भनेर। ला! म त कस्तो हुस्सू मान्छे, अहिले मलाई छलफल गर्न जानु थियो। म त यहीँ भुलेँछु।”
हतार हतार उठ्दै भन्छन्, “ल अहिले गएँ हतार भो। बरु भोलि हामी 'जाभा' मा भेटौं न। सबैजना।”
हामी सबैले सहमतिमा टाउको हल्लाउँछौँ।
(राष्ट्रबैंकको मासिक पत्रिका मिर्मिरे, २०६६ बैशाख अङ्कमा प्रकाशित)
Posted by CP Aryal (सिपी अर्याल) at 10:01 PM
RRijal August 18, 2010 at 11:06 AM
अर्याल जी, ज्यादै उत्कृष्ट । मैले करिब १ बर्ष अगाडी पढेको थिएँ - पल्पसा क्याफे, र त्यो अन्त्य स्विकारेको थिइन । आज तपाईँको ब्लगमा यो लेख पढेर बल्ल पल्पसा क्याफेलाई बिट मारेँ । धन्यबाद !
Goma August 19, 2010 at 10:56 AM
Good connection of story. u divert the tragic end of the story into romantic end and story itself sounds good !!
Saayad Asok August 19, 2010 at 11:04 PM
....some writers have tried digging the identity of those lost characters but not all have succeded..this story is dynamic, the perception can change, and even the situation can change...also it can happen that new plots can emerge from this ending....so, it isagood story with good artistic projection....cp ji, congratulation for this nice story....the story has made the readers to read "palpasa cafe" once again and those who have not read, for them, now its mandatory to read the novel to feel the essence of ur story.........
surajshakya.com August 26, 2010 at 6:06 AM
धन्यवाद सीपी जी, बल्ल ह्याप्पी ईण्डिङ भयो :-)
CP August 29, 2010 at 8:59 PM
Rijal जि, Goma जि, Sayad Ashok जि र Suraj Shakya जि : कथा मनपराएर कमेन्ट गरिदिनुभयो । धेरै खुसी छु ।
Dhruba Panthi September 20, 2010 at 4:21 PM
धेरै पछि आइपुगेछु यो पोष्टमा। रमाइलो लाग्यो पल्पसा बाँचेको युगको कथा (हुनत मलाई पहिलेकै कथासँग पनि खासै गुनासो छैन किनभने जीवनका कथा सधैँ सुखान्त हुँदैनन्)। मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको प्रसङ्ग आउँदा त सत्य घटना नै पढ्दै छु कि जस्तो समेत लाग्ने तर बूढा कता हराए कता खै...
Ankita Bhattarai November 13, 2017 at 11:56 AM
यो पोस्टमा आईपुग्न बेर भयो थक्क थक्क छु ! पल्पसा क्याफे दोहोर्‍याए पछि मन भारी हुन्थ्यो । आज एउटा दु:खद क्षण जिवनबाटै गए झै भाछ् !